Tel : 01-204055, 204069, 298540, 296401, 397649.
Fax : 951-204055.
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ဖော်ဆဲ လုပ်ငန်းထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကအားထားရာ လုပ်ငန်း
ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဒေသမှာ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ ကုမ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားသောမြို့များတွင်လည်း ကောင်းမွန်သောပရောဂျက်များ၌ ဖြန့်ကြက်၍ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်မှန်းထားရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်သမားများအတွက် လုံခြုံ၍ အဆင့်မီသော အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးပေးလျက် အမျိုးမျိုးသော
ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုများကိုဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆောက်လုပ်ဆဲ တိုက်များ၌ သတ်မှတ်လျာထားမှုနှုန်း ပြည့်မီ၍ ၀ယ်သူများအတွက် ငွေပေးချေစနစ်ကို ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးရာ ၀ယ်ယူသူများကို ရေရှည်လက်တွဲ ဆောင်ရွက်မလည်း အကျိုးရှိစေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းများမှာ အချို့ပြီးစီးပြီ ဖြစ်၍ အချို့မှာ ဆောက်လုပ်ဆဲကာလတွင်ရှိပါသည်။ နောင်အနာဂတ်တွင်လည်း အထင်ကရနေရာများ၌ ဆောက်လုပ်ရန်စီမံကိန်းများ ထားရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှု အဟုန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများကကြီးကြပ်ပြီး အပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပဏီ၏ ထင်ရှားအရေးပါသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများသည်အဆောက်အဦးများကို ၀ယ်ယူသူများက လိုလားနှစ်ခြိုက်စွာ လက်ခံဝယ်ယူခဲ့မှုက ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပဏီကို အချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်မှုအထောက်အကူကောင်းစွာပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပဏီ၏ အမည်ဂုဏ်သတင်းသည်သာ အဖိုးမဖြစ်နိုင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။
(ဗဟိုလမ်း)၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၃၀)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်(၃၈)၊ ၂၃လမ်း၊ ၈၁လမ်းနှင့်၈၂လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်(၅၇)၊ ပြည်သာယာလမ်း၊
အမှတ်(၃၂)၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၂၊၄၊၆)(၁၁၊၁၃)၊ ဗညားဒလလမ်းနှင့် မြရာကုန်းလမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၅၇)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၁၅၀/၁၅၂)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၁၀၄)၊ ၉၄လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Royal Family LandHousing, သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Housing(2), သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Royal Family Land Housing
ရန်ကုန်မြို့။ Great Family Land Housing(2),
Great Family Land Housing (3)
ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်(၇၂)၊ ရိပ်သာလမ်း၊
ရန်ကုန်မြို့။ Royal Family Land
Housing(3), သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၇၂)၊ ရိပ်သာလမ်း၊ ပြည်လမ်း(၆)မိုင်ခွဲ၊
Father land Villa သန်လျင်မြို့နယ်၊
အမှတ်(၁၂၁/I-၁)၊ (၁၂၁/F-၁)၊ ၂ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊
Father Land Villa
၂ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။